QAABKA KORANTADA KORONTADA AYAA U FIICAN: TALOOYIN IYO TABAHA LOO DOORTO - MISHIINADA GAARKA AH
Hilibka iyo cawska si fiican loo hayo - qurxinta deyrka iyo goob beerta. Gacan-siinta cawska oo si siman loola socdo, sidaas darteed horumar ayaa ka timaada samatabbixinta adigoo na siinaya qalab daryeel oo kala duwan. Waxa kaliya oo ay tahay in la go'aamiyo kuwa iyaga ka mid ah - inay doortaan cirroole, motokosa ama qalajiye.
Ujeedada qalabka ee dacha
Qalabka beerta korontada waxaa loogu talagalay in lagu daryeelo meelaha yaryar oo leh dhul adag iyo caqabado badan (sida dhirta ama sariiraha ubaxa). Qalajiistu waa bir bir ah oo ay ku jiraan mishiinka iyo madaxa goynta. Cabbiraadaha iswaafajiya waxay si weyn u kordhinayaan dhaqdhaqaaqa qalabka oo ay u oggolaadaan cawska cawska ee aan la geli karin meelo qalab badan.
Ma taqaanaa? Tikidhada ugu horeysay waxaa lagu sameeyay qasacado madow, kaas oo ganacsade Maraykan ah George Bollas uu sameeyay godad, oo wuxuu ku jaray qaybo ka mid ah kalluumeysiga dherer yar.
Sida magacu sheegayo, ciriiriyeyaasha cawsku waxay ku qalabeeysan yihiin mishiinka laga shaqeyn karo shabakad koronto ama batari.
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u ogaato shuruudaha aasaasiga ah ee lagu dooranayo koronto-korantada korantada ee goobta.
Waxay ku kala duwanaan karaan qaababka naqshadeynta qaarkood:
nooca qalabka wax lagu gooyo (xarig kalluumeysi, silig ama mindiyo);
meesha gawaarida (top ama hoos);
qaabka qaabka (D-qaabeeya ama T-qaabeeya).
Qalabka guriga ayaa leh awood yar (ilaa 1000 W, badanaaba aan ka badneyn 750 W). Iyada oo leh awood yar oo mashiinka, xulashada cutubka goyntu waxay ku koobantahay xarig kalluumeysi ah qayb yar (ilaa 2 mm). Qalab noocan oo kale ah ayaa loogu talagalay in lagu daaweeyo cawska leh cawska jilicsan oo aan la qabsan karin dhirta oo leh dhumuc qaro iyo xoortay. Mishiinada noocyada noocan oo kale ah ayaa badanaa ku yaal hoose, kaas oo si fudud u fududaynaya naqshadeynta.
Gacmuhu waa D-qaabeeya, waa ikhtiyaari badan oo raaxo leh marka la shaqeynayo meelaha yaryar, sidoo kale waxay yareyneysaa cabbirka dhismaha.
Ma taqaanaa? Ereyga "trimmer" wuxuu ka yimaadaa erayga Ingiriisiga ah si uu u daboolo, jarjar.
Qalabka xirfadlayaasha ah waxay leeyihiin qaab-dhismeed kaas oo mashiinku ku yaala xagga sare wuxuuna leeyahay awooda ilaa 2 kW. Mashiinka noocan oo kale ah ayaa kuu ogolaanaya inaad gashato madaxa madax-goynta oo aan ku xirneyn kaliya xarig kalluumeysi ama xarig, laakiin sidoo kale leh mindiyo balaastig ah ama bir ah, taas oo si weyn u kordhisa wax-soo-saarka.
Dareemayaasha noocan oo kale ah waxay si fudud ula qabsan doonaan cawska iyo xoollaha yar yar. Gacanta T-shinka ayaa aad u haboon marka la samaynayo aagagga waaweyn oo aan loo baahneyn manevar gaar ah.
Ogow gidaariyaha gaasku ka fiican yahay inuu doorto inuu bixiyo.
Talooyin ku saabsan doorashada
Waxaa jira qalab aad u ballaaran ee suuqa, oo ogaanaya sida loo doorto cawska korontada, waxaad dooran kartaa xulashada ugu wanaagsan, iyadoo la tixgelinayo baahidaada iyo qiimaha cutubka.
Waxaa jira dhowr shuruudood oo xulasho ah si ay ugu taxaddaraan marka hore:
Waxqabadka. Saameyntan waxay kuxirantahay awoodda mashiinka iyo naqshadeynta madaxa goynta. Waa in maskaxda lagu hayaa in moodooyinka awoodda badan leh ay leeyihiin miisaan aad u wayn iyo qiimo aad u sarreeya. Wixii ah goob wanaagsan oo 6 acres, korontada ilaa 750 watts ayaa ku filan.
Gawaarida meesha Dharbaaxiyaha hooseeya waxay leeyihiin miisaan aad u hooseeya iyo qiimo sababtoo ah maqnaanshaha habka gudbinta. Si kastaba ha noqotee, gawaarida noocaas ah waxay qalabeeyaan muraayadaha awoodda hoose, siday u kala horreeyaan, waxay qabaan waxqabadka hoose.
Waa muhiim! Makiinada meelaha hoose waxay qaboojin karaan oo way kufilan karaan.
Qaabka qalinka. Gacmaha D-qaabaysan waxay u sahlanaato maneuvering, boodboodaan caqabado iyo xagasha cawska. Iyada oo ay taarbada T-shaped la mid ah bareegga baaskiilka, way sahlan tahay in lagu maareeyo aagagga waaweyn sababtoo ah culeys labis oo labada gacmood ah.
Joogitaanka suumanka. Haddii doorashadu ay ku dhacdo qaab xoog leh oo leh mashiinka sarre, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah siisid garbaha garbaha, waxay si aad ah u fududeeyeen shaqada shaqada leh, ka saarista culeyska.
Soo saaraha. Qalab badan oo qalabkan ah ayaa lagu soo bandhigay suuqyada oo kala duwan oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, si loo kaydiyo lacag, ma aha mid ku habboon in la iibsado calaamad aan la garanayn, haddii ay dhacdo burbur, ma heli doontid dayactir gareyn oo waxaa dhici karta in ay jiraan dhibaatooyin qaybaha loo yaqaan 'spare parts'.
Waxa aanad bixin karin
Marka aad dooranaysid qalabka korontada, joogitaanka nidaamka ka hortagga dabka ayaa noqonaya mid aan khuseyn - mashiinka korontada ah ma abuurayo qalab xoogan oo ah qalab casri ah.
Sidoo kale marar dhif ah ayaa loo isticmaali karaa suurtagalnimada in la hagaajiyo dhererka xayawaanka cawska, sidaas darteed laguma talinayo in lacag dheeraad ah la bixiyo. Qalabka korontada ku shaqeeya ee leh bateriga ayaa wali qaali ah isla markaana waqti isku mid ah ma bixiyaan nolol batteri dheer. Miisaanka dhismaha waqti isku mid ah sababtoo ah bateriga ayaa kordhaya.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato sida loo beeray cawska.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada qalabka korontada
Badanaa, doorashada ugu dambaysa ee aagagga yaryar waxay hoos ugu dhacdaa shidaalka ama koronto-farsameedka iyo su'aasha ah midkee ka wanaagsan in la isticmaalo oo uu helo dib u eegis wanaagsan.
Qalabka korantada ayaa leh tiro faa'iido leh marka la barbardhigo dhiggiisa shidaalka:
wax qasaare ah lama saari karo;
garaac yar iyo qeylada;
fududayn iyo kharash yar oo adeeg ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tiro ka mid ah caqabadaha oo sidoo kale u baahan in la xuso:
qadar yar, oo xadidaya dhererka xadhigga dheeriga ah iyo helitaanka barta;
Waa muhiim! Marka qalabka korantada uu shaqeynayo, waa lagama maarmaan in la isku xiro caanaha adigoo isticmaalaya bareeg dhul ah iyo khad koronto oo dheellitiran oo la qaadi karo oo u adkeysan kara culeysyo badan.
awood la'aanta in ay ka shaqeeyaan cimilada qoyan (ka dib roobka, waraabinta, ama dhererka badan) sababtoo ah khatarta wareegyada gaaban.
Iyadoo qalabka saxda ah, xagaaga ma noqon doono taxane ah oo ah waajibaadka beerta caajiska ah, iyo daryeelka cawska, haddii aysan ku noqonin raaxo, waxay noqon doontaa dhibaato.